सा’वधान यी ४ पो’जिसनमा नसुत्नु, हुनसक्छ ख’तरा ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठरोचकसा’वधान यी ४ पो’जिसनमा नसुत्नु, हुनसक्छ ख’तरा !
सा’वधान यी ४ पो’जिसनमा नसुत्नु, हुनसक्छ ख’तरा !
योत तपाई सबैलाई थाहा नै होला, हामी ४ पो’जीसनमा सुत्ने गर्छौ । जुन हो एउटा दायाँ तर्फ, बायाँ तर्फ, सिँधा र उल्टो ।हामी सबै यस्तै पो’जीसनमा सुत्ने गछौँ । तपाईले देख्नुभएकै होला, जब हामी सुत्छौँ, सुत्दा सुत्दा ड’राउँछौँ।
या कुनै अ’नौँठो सपना देखेर सु’त्न सक्दैनौ । कैँयौ चोटी पो’जीसन नमिल्दा बि’रामी पनि ब’नाइदिन्छ । तपाईको सुत्ने पो’जीसन ग’लत हुनुका कारण तपाई बि’रामी हु’नुभएको म हशुस गर्नुहुन्छ। आज हामी केही पो’जिसका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
१) यदि तपाई खाना खाएपछि सु’त्ने त’रखरमा हुनुहुन्छ भने बायाँ तर्फमा मुख गरेर सु’त्नुहोला । यसले तपाईको शरीरमा भएको खानालाई ढि’लो ढि’लो गरी प’चाउँदछ ।यसो गर्नाले तपाईको शरीरको ता’पमान सहि रहन्छ । किनकी शरीरको बायाँ तर्फमा पा’चन तन्त्र हुन्छ र हृ’दय पनि शरीरको बायाँ तर्फमा नै हुन्छ ।
तर यदि तपाई यसको वि’परीत दायाँ तर्फमा सुत्नुहुन्छ भने तब तपाईले खाएको खाना छिटै छिटै पाच’न हुन थाल्छ । जुन स्वास्थ्यको लागी ह’दभन्दा बढि नो’क्सानदा’यक सा’बित हुन्छ ।२) हामीले सु’त्ने समयमा सि’रानी राखेर सिँ’धा सु’त्नु हुँदैन ।किनकी यसो गर्नाले मे’रुदण्डको हड्’डिमा ठुलो स’मस्या पर्न सक्छ ।
यदि तपाईलाई सिरानी राखेर सुत्नै पर्छ भने बायाँ तर्फ मुख फ’र्काएर सुत्नुहोला । यसो गर्नाले तपाईको मे’रुदण्डको ह’ड्डि सँधै सिधाँ रहन्छ ।३) ध्यान दिनुहोस् कहिले पनि व्यक्ति पेटमा नि’र्भर भएर सु’त्नुहुँदैन । यसो गर्नाले शरीरलाई सबैभन्दा बढी नो’क्सान हुन्छ । र पेटमा ’निर्भर भएर सु’त्नाले अर्थात् उल्टो सु’त्नाले शरीरमा धेरै तौल पर्दछ।
जसले हृ’दय सम्बन्धि बि’मारी हुने स’मस्या पनि सँधै बनिरहन्छ । यतीमात्रै होइन एक अनुसन्धानमा यो पनि भनिएको थियो कि सबैभन्दा ख’तरनाक पो’जीसन पेटको बलमा सु’त्नु अर्थात् वा उ’ल्टो सुत्नु हो ।४) एक अनुसन्धानमा यो प’त्ता लगाइएको थियो कि दु’नियाभरमा करिब ७५ प्रतिशत मानिस घुँ’डा खु’म्चाएर सु’त्ने गर्दछन् ।
जसले घुडाँको जो’इन्ट पो’इन्टमा नराम्रो अ’सर पर्दछ । यसरी सु’त्नाले तपाईलाई थ’काइ दु’खाइ उ’त्पन्न हुनसक्छ ।जसको घुँडा खु’म्चाएर सु’त्ने बानी ह’टेकै छैन, त्यस्ता व्यक्तिले दुबै घुँ’डाको बीचमा सि’रानी राखेर सुत्नुहोला । यदि तपाई स्वस्थ र राम्रो नि’द्रा लिन चाहनुहुन्छ भने यी पो’जीसनहरुमा सुत्नु आवश्यक छ।